Fahadisoana bilaogy efatra tokony ho nisorohana | Martech Zone
Asabotsy Jolay 5, 2008 Sabotsy 28 Novambra 2015 Douglas Karr
Androany tolakandro dia nandany ora vitsivitsy tany Barnes sy Noble aho. Barnes sy Noble dia akaiky kokoa ny tranoko, saingy mila miaiky aho fa voalamina tsara kokoa ny sisintany ary mora ny boky. Tsy mitsahatra 'mandeha amin'ny lalantsara' any Barnes sy Noble aho fa tsy mandany fotoana mamaky.
Na izany na tsy izany dia naka ny magazine tiako indrindra aho, Famolavolana tranonkala azo ampiharina (aka .net) ary naka ihany nony farany Darren ary Chris'boky, Tsiambaratelo momba ny fitorahana bilaogy ny làlana mankany amin'ny fidiram-bola enina.
Heveriko fa tsy rariny loatra ny lohatenin'ilay boky. Na dia be aza ny boky momba ny fanangonam-bola sy ny fahombiazan'i Darren amin'izany, ny toro-kevitr'ilay boky dia niitatra lavitra lavitra. Azoko atao amin'ny olon-kafa avy amin'ny torolàlana momba ny paikady amin'ny fanaovana bilaogy ihany koa izany. Tsy mitovy amin'ny boky hafa ankafiziko amin'ny fitorahana bilaogy izany Shel ary Scoble's boky, Resadresaka mitanjaka, amin'ny maha-taktika azy kokoa amin'ny fomba fiasa fa tsy stratejika. Ity dia boky iray hanombohana anao amin'ny fitorahana bilaogy mahomby.
Nanamafy ny teknika sy tetika nolazaiko tato amin'ity bilaogy ity ny boky, saingy tokony hizara aminareo ny lesoka lehibe indrindra amin'ny fitorahana bilaogy aho:
Tsy mifanaraka matetika ny famahanako bilaogy noho ny fandaharam-potoanako. Mampijaly ny fiainako io satria tsy matoky ny votoaty misy kalitao isan'andro ny mpamaky.
Ny tranokalako dia marika marimarina kokoa amiko noho ny Teknolojia Marketing ary maro amin'ireo lahatsoratra no mizara anecdotes manokana izay mety tsy misy ifandraisany amin'ny Teknolojia Marketing. Tonga saina ny mpamakiako fa avy amiko izany, saingy fantatro fa mpamaky maro no nandeha an-tongotra noho izany.
Ny bilaogiko dia mety ho voakilasy ho lohahevitra marobe izay kendrena bebe kokoa… angamba ny Marketing amin'ny Internet, ny haino aman-jery sosialy, ary ny fampandrosoana Internet. Mbola mety miasa aho indray andro any hamongotra ny atiny, saingy asa mafy (henjana) izany. Raha te hanomboka indray aho dia azo antoka fa izany no lalana tokony ho nalehako.
Ny anarako dia tsy dknewmedia.com. Indray mandeha indray, ity dia mampanjavozavo ny bilaogy eo amiko sy ny tena lohahevitro. Izy io koa dia mahatonga ny bilaogy tsy ho azo hamidy, satria tsy te hivarotra ny anarako aho. Manara-maso maso ireo faritra sasany anefa aho! Raha afaka mahita zavatra tsara sasany aho, dia hijery hampifangaro ny atiny sy hanaisotra ny bilaogiko amin'ny anarako.
Manantena ny fandraisan'i Chris sy Darren an'ity lahatsoratra ity. Raha mbola tsy mitoraka bilaogy ianao dia aza hadino ny maka ny bokin'i Darren sy Chris mba hanombohanao amin'ny làlana tsara. Mamaky tsara!
Tags: AnalyticsfamoronanaNy fahatsapana voalohanyIntegrateddokam-barotra tafiditraVahaolana Marketing Schaefer
6 Jul 2008 amin'ny 5:41 PM
Misaotra tamin'ny tolo-kevitra. Hijery azy io tokoa aho.
Mandritra izany fotoana izany, ny vahaolana ho an'ny # 3 dia ny famoronana bilaogy misaraka amin'ny lohahevitra samihafa. Na dia mamela ahy hampifantoka ny soratako ho an'ny mpihaino tsirairay aza izy io, indraindray dia mandreraka ny manandrana mamorona izany atiny vaovao izany.
Te handre ny hevitry ny hafa aho. bilaogy misaraka, sa mety hanilika ireo mpamaky sasany anao?
Jul 7, 2008 amin'ny 9: 33 AM
Ny fampisarahana ny atiny amin'ny bilaogy kendrena misaraka dia manana tombony betsaka, arakaraka ny andrasan'ny mpamakinao sy ny teny lakile mifantoka amin'ny motera fikarohana. Tsy misy antony tsy ahafahan'ny olona misoratra anarana amin'ny bilaoginao tsirairay, heveriko fa izany no fomba tsara indrindra aleha!
6 Jul 2008 amin'ny 10:47 PM
Heveriko fa ny manasaraka ny atiny ao anaty bilaogy iray no fomba handehanana fa tsy bilaogy telo na efatra samihafa. Heveriko fa raha manam-potoana hanavaozana ireo bilaogy ianao dia ho mora izany.
Jul 8, 2008 amin'ny 6: 21 AM
Misaotra tamin'ilay voalaza ao amin'ny boky 🙂 Na inona na inona fomba fanoratana ny bilaogy, matetika ny feo ao aoriany dia ampahany manakiana ka aza hadino ny fofona "Douglas" 😉
10 Jul 2008 amin'ny 8:40 PM
Misaotra Chris! Tsia - Tsy ho diso amin'ity bilaogy ity i Doug raha tsy avy eo dia mampanantena aho… raha tsy hoe misy vola eo anelanelan'ny bilaogy amiko 😉
Fanamarihana mahaliana momba an'io, tao anatin'ny andro vitsivitsy nanovako ny anarako dia niala tamin'ny # 2 tao amin'ny Google aho ka lasa # 1 ho an'ny Blog Technology Technology ka misy zavatra ao amin'ity SEO ity.
Manao fandinihana tranga tsara amin'ny fisafidianana ny anaranao!
Aug 5, 2008 amin'ny 9: 33 AM
Gee whiz. Manadino ny bokiny efa nahita ny bilaogin'ireto lehilahy ireto. Misaotra an-doha.